Rakhine Scholarships | CDNH
Anti-Human Smuggling and Trafficking Initiative
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စာစစ်ဌာနအသီးသီးမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း၌ အမှန်တကယ် နေထိုင် သူဖြစ်ရမည်။
၂။ ပညာသင် ထောက်ပံကြေးများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီး၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် သူနာပြုနှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်းများ အပါအဝင် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ် အသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိထားသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ အားလုံး လျှောက်ထား နိူင်ပါသည်။
၃။ လျှောက်ထားသူသည် စီးပွားရေး (သို့မဟုတ်) လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေရသူ ဖြစ်ရပါမည်။ လျှောက်ထားသူနှစ်ဦး၏ အခြေအနေ အရပ်ရပ် ဆင်တူနေခဲ့ပါလျှင် ပညာရေး ပိုမိုထူးချွန်သူကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမည်။
၄။ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်စီအတွင်း လစဉ် USD 200 နှင့်ညီမျှသောကျပ်ငွေကို ပညာသင် ထောက်ပံကြေး အဖြစ် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသား များ အနေဖြင့် စာကြိုးစားပြီး နှစ်စဉ် အတန်း အောင်မြင်ပါက ပညာသင် ထောက်ပံကြေးကို (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူဆည်းပူးပြီးနောက်ပိုင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ကွဲပြား ခြားနားမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် လည်းကောင်း၊ အကယ်၍လိုအပ်ခဲ့လျှင် ရခိုင် ပြည်နယ်ရှိ မိမိ၏ လူမှုအသိုက် အဝန်း အတွင်းသို့ ပြန်လည်သွားရောက်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဟူသော ကတိကဝတ်ကို ပညာသင်ထောက်ပံကြေး ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ ရှေ့မှောက်၌ ခံဝန်ချက် လက်မှတ် ရေးထိုးရမည် ဖြစ်သည်။
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စာစစ်ဌာနအသီးသီးမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင် သူ ဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း၌ အမှန်တကယ် နေထိုင် သူဖြစ်ရမည်။
၂။ ပညာသင်ထောက်ပံကြေးများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီး၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် သူနာပြုနှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်းများ အပါအဝင် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် အသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိထားသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအားလုံး လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။
၃။ လျှောက်ထားသူသည် စီးပွားရေး (သို့မဟုတ်) လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေရသူ ဖြစ်ရပါမည်။ လျှောက်ထားသူနှစ်ဦး၏ အခြေအနေအရပ်ရပ် ဆင်တူနေခဲ့ပါလျှင် ပညာရေးပိုမိုထူးချွန်သူကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမည်။
၄။ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်စီအတွင်း လစဉ် USD 200 နှင့်ညီမျှသောကျပ်ငွေကို ပညာသင်ထောက်ပံကြေး အဖြစ် ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသား များ အနေဖြင့် စာကြိုးစားပြီး နှစ်စဉ် အတန်းအောင်မြင်ပါက ပညာသင် ထောက်ပံကြေးကို (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူဆည်းပူးပြီးနောက်ပိုင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် လည်းကောင်း၊ အကယ်၍လိုအပ်ခဲ့လျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မိမိ၏ လူမှုအသိုက်အဝန်း အတွင်းသို့ ပြန်လည်သွားရောက်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဟူသော ကတိကဝတ်ကို ပညာသင်ထောက်ပံကြေး ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီရှေ့မှောက်၌ ခံဝန်ချက်လက်မှတ် ရေးထိုးရမည် ဖြစ်သည်။
၆။ လျှောက်လွှာများကို ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် အမျိုးသားရေးသဟဇာတ ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာရေးအဖွဲ့ (CDNH) ရုံးများ တွင် အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် www.cdnh.org/RakhineScholarships အွန်လိုင်းမှလည်း ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါသည်။
၇။ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ပညာသင်ကြားရန် လျှောက်ထားမည့် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ် အသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိပြီးသည့် အချိန်မှသာ စတင်လျှောက်ထားပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအချိန်ရောက်မှသာ လျှောက်လွှာများကို သတ်မှတ်ထားသောပုံစံအတိုင်း ပူးတွဲပေးပို့ရမည့် စာရွက်စာတမ်း များနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။(အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်)။
လျှောက်လွှာများကို ဖော်ပြပါ CDNH ရုံးများသို့ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
CDNH ရုံးချုပ်၊ အမှတ် ၁၂၊ ရွှေလီလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း- ၀၁-၂၃၀၆၃၅၆၊ ၀၉-၄၅၇၀၂၂၂၃၃
CDNH ရုံးခွဲ၊ အခန်း B-၄၈၊ ဝေသာလီ အိမ်ယာ၊ မကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဖုန်း- ၀၉-၄၅၉၆၆၇၆၈၆
CDNH ရုံးခွဲ၊ အမှတ် ၁၄၂၊ ဗန္ဓုလ (မြို့ဝင်လမ်း)၊ မြို့မကညင်တန်းရပ်ကွက်၊ မောင်တောမြို့ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဖုန်း- ၀၉-၂၆၂၇၈၃၃၅၁
CDNH ရုံးခွဲ၊ အမှတ် ၈၀၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဖုန်း- ၀၉-၄၂၀၈၈၇၈၉၆
အွန်လိုင်းမှ ပေးပို့လိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်လိပ်စာများသို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။
၈။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဆု လျှောက်ထားရာတွင် CDNH အနေဖြင့် ငွေကြေး တစုံတရာ ကောက်ခံခြင်း၊ CDNH သို့ ပေးဆောင်ရခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါသောကြောင့် အကယ်၍ ငွေကြေးတောင်းခံကြောင်း မသင်္ကာဖွယ်ရာတွေ့ရှိပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၇၀၂၂၂၃၃ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၉။ အမျိုးသမီးများနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကန့်သတ်ခံအုပ်စုများ လျှောက်ထားသင့် ပါသည်။
၁၀။ ပညာသင်ကာလတွင် စာမေးပွဲကျရှုံးလျှင်သော် လည်းကောင်း၊နိူင်ငံတော်က ပြဌာန်း သတ်မှတ် ထားသောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ချိုးဖောက် ကျုးလွန်ကြောင်း အထင်အရှားတွေ့ရှိရ လျှင်လည်းကောင်း၊ တက္ကသိုလ်ဥပဒေပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ကျုးလွန်လျှင် သော်လည်းကောင်း ပညာသင် ထောက်ပံကြေးဆု ရပ်စဲပါမည်။
ပညာသင်ဆု ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်လွှာများကို အောက်ဖော်ပြပါ Download Link မှ ရယူနိုင်ပါသည်။
Download>>INCLUSIVE SCHOLARSHIPS IN RAKHINE STATE APPLICATION FORM
INCLUSIVE SCHOLARSHIPS IN RAKHINE STATE PROJECT
Soliciting applications for 2020-2021 academic year
YANGON, MYANMAR, August 11, 2020 – The Scholarship Selection Committee for the Inclusive Scholarships in Rakhine State Project has announced the launching of inclusive scholarships in Rakhine State. The scholarships are intended for those who have passed the matriculation examination in 2020 and are eligible to attend the higher education institutions, including nursery and midwifery schools, for the 2020-2021 academic year. Applicants should be legal and current residents of Rakhine State.
The scholarship would be awarded asamonthly stipend in local currency, equivalent to US$200, for each academic year. It will continue for four years, on the condition that the student passes each year. Applicant should be facing hardships, due to financial or security issues. If the situation is similar for two applicants, priority would be given to the one who has achievedabetter educational track record.
Hard copies of the application forms are available at the Center for Diversity and National Harmony (CDNH) offices, and township education and administration offices in Rakhine State. A soft copy is available online at (www.cdnh.org/RakhineScholarships). Application should be filled out, in the provided format, and submitted (soft or hard copy), together with information to be attached, starting from the day of this announcement.
Hard copies should be sent to one of the CDNH offices:
CDNH Main Office, 12, Shwe Li Road, Kamayut Township, Yangon. Tel: 01-2306356
CDNH Sub-Office, Room 48, Building 8, Min Gan Ward, Sittwe. Tel: 09-420330759
CDNH Sub-Office, 142, Bandula (Myowin Road), Myoma Kanyin Dan Ward, Maungdaw. Tel: 09-262783351
CDNH Sub-Office, 80, Bayintnaung Road, (7) ward, Thandwe. Tel: 09-420887896
Soft copies should be sent to:
Women, minorities, and marginalized groups are strongly encouraged to apply.
No-12, Shwe Li Street, Kamayut Tsp, Yangon Division, Myanmar.
+95 (0)1 2306356 ~ 57 ~ 58
© 2015-2022 Center for Diversity and National Harmony. All Rights Reserved.